Chelsea dia afaka manohitra ny amboaran'ny Premier League, hoy i Tammy Abraham | 1xbet
Tammy Abraham dia nanambara tamim-pahatsorana fa mitazona ny volavolan-kevitr’i Manchester City sy Liverpool ho an’ny amboaran’ny Premier League i Chelsea na eo aza ny fanombohany sarotra teo ambany fitantanan’i Frank Lampard. Eni Aluko Vakio bebe kokoa </p <
Mbola misy vanim-potoana lava ho avy ary mbola eo amin’ny fifaninanana lehibe ihany koa isika. Momba ny fandraisantsika azy izao. Ny teboka amin’ny alahady dia ho goavana ho antsika. ”
“Nanana vanim-potoana farany vitsivitsy sy zava-dehibe vitsivitsy aho. Mampalahelo fa diso ny iray amin’ireo zava-dehibe indrindra ho an’i Chelsea aho. Ny momba ny fihetsiko sy ny fiakarako fotsiny ny lohako.
Samy namihina ahy daholo ny olona. Nilaza izy ireo fa diso ny mpilalao tsara indrindra, zavatra ianarana avy izany. Aleo izany nitranga ankehitriny toy izay taty aoriana. Mihalehibe ianao ary mianatra avy amin’izany. “</P <” Ny lalao an-trano voalohany nataon’i Lampard satria ny mpitantana an’i Chelsea dia mino i Abraham fa izy no fotoana mety indrindra handroahana ny fahadisoam-panantenan’ny herinandro fanokafana.Hoy izy: “Mihevitra aho fa ho ao aoriantsika ireo mpankafy. Nahazo fampisehoana roa tsara izahay ary hitan’izy ireo izany. Mino aho fa ho ao aoriantsika izy ireo ary antenaina fa afaka manome fampisehoana ho azy ireo isika. “